Sidee loogu daraa SEO-ga luqado kala duwan leh?
Maanta, ku dhowaadba qof walba oo shabakada ganacsiga ah wuxuu ku guuleysan karaa in uu ordo adeegga dukaanka ama bixiyaha adeegga internetka. Waxay u noqotay suurtogalnimada awoodda sare ee Webka, taas oo suuragal u ah in ganacsade kasta oo internetka ah uu ku mashquulsan yahay malaayiin qof oo macaamiisha ah oo adduunka oo dhan ah. Iyo la-tacsiyeynta dhagaystayaasha luqadaha kala duwan ee xudduudaha dabiiciga ah waxay si aad ah ugu baahan tahay inaad ku darto SEO-ga luqado kala duwan ah (haddii kale SEO-ga caalamiga ah). Sidan, si fiican u socodka Mashiinka Raadinta Wanaagsan ee heer caalami ah (caalami ah) waxay si dhakhso ah u noqon kartaa mid waxtar leh marka loo eego SEO-ga oo si toos ah loo bartilmaameedsanayo
. Ma aha in la yiraahdo marka aad ku dareyso SEO-ga caalamiga ah ee boggaga, waxaad albaabka u furi kartaa halbeegyo tiro badan oo fursado kala duwan loogu talagalay mashruucaaga internetka (gaar ahaan marka la barbardhigo waxqabadka ganacsiga caadiga ah). Qaadashada macaamilka - waa lagama maarmaan in lagu daro SEO si loo helo shabakad u ogolaatay in ay istaagto oo loola jeedo dhagaystayaasha caalamiga ah dhawaan waxay noqotay MUST loogu talagalay macaamiisha ganacsiga, diyaar u ah oo diyaar u ah guusha dhabta ah.
Ka hor intaanad bilaabin
Ugu horreyntii, ka hor intaadan qaadan Karin go'aan fiican oo aad ku dari karto SEO si aad u hesho bogga caalamiga ah, waxaad u baahan doontaa inaad sameysid naftaada oo ah hoggaamiye ku salaysan suuq gaar ah. Marka ganacsigaaga cusubi uu dhameystirayo hadafka koowaad ee hal luqad, waxyaabaha soo socda waxay sameynayaan inay la hadlaan qaar ka mid ah dhageystayaasha si gaar ah loogu beegsanayo dalal kale. Sida cad, geeddi-socodkaasi wuxuu ku bilaabmayaa iyada oo la turjumayo bogagaaga bogga luqad labaad iyo mid saddexaad, iyadoo maskaxda lagu hayo baahi weyn oo loo qabo in lagu daro SEO si loo helo websaydh heer kasta oo ku-meel-gaar ah. Sidaa daraadeed, aan ugu dambeyntii eegno arinta tallaabo tallaabo tallaabo ah.
Waxyaabaha hal mar ah
Inta badan shirkadaha ayaa u soo baxa si ay u bilaabaan boggooda internetka ee luqado kala duwan bilawgii. Adiga oo tixgelinaya in aad heshay miisaaniyad ballaadhan oo ballaadhan xilliga bilowga, fikraddu waxay u muuqan kartaa mid dhawaaq ah. Laakiin halkan waa taxadar. Bal qiyaas, waxaan ku guulaysanay dukaanka webka ee lagu soo bandhigay dusha sare ee bogagga natiijooyinka raadinta (SERPs), tusaale ahaan Ingiriisi. Ma jiraa dammaanad ah in qoraalkeena ajnabiga ah, tusaale ahaan, loo tarjumay Isbanish ama Jarmal, si uu u qabsado sidoo kale? Uma maleynayo. Marka, goorma ayaan bilaabaynaa fidinta luqadani? Waxaan rumaysanahay in wakhtiga ugu wanaagsani ay tahay markii aad horey u bilowdey oo aad ku guulaysatay in aad sii wado website-yo guul leh oo Ingiriisi ah:
Sawir ganacsi oo ganacsi oo si fiican u shaqeeya Ingiriisi
xooggaar saarista habdhaqanka CMS iyo qaab-dhismeedka shabakadda
Waa inaad caqli-gal tahay inaad bilawdo hal luqad oo cusub waqti (sidan oo kale, waxaad yeelan doontaa wakhti ku filan inaad ku darto SEO si aad uhesho luqaddaas, ee SERPs ka hor inta aanad gelin heerarka luqadaha ku xiga ee ku xiga)
Ku darso cilmi baaris ku habboon luuqada bartilmaameedka ah ee aad qorsheyneyso inaad ku darto (sidatan, dooro keliya ereyada muhiimka ah ee leh raadin sare,
Qayb kasta oo cusub ee la turjumay ee ku qoran boggagaaga waa in ay ku jiraan ugu yaraan dhowr bog oo bogagaaga ah, ama wax kasta oo la wadaago (sida ugu dhaqsaha badan, markaad kor u qaadayso bogaga internetka iyada oo loo marayo ololaha dhismaha ee isku dhafka ah) 21)
Labo-kontorool oo labadaba o wax kasta oo ka mid ah
Inaad tagto luqado kala duwan,. Looma baahna in la xakameeyo tiro dhowr ah oo kala duwan, marka aan kugula taliyo inaad haysato CMS isku mid ah si aad ugu turjumto qoraalkaaga marar badan. Waxaa jira nidaamyo Maarayn Miisaaniyadeed oo casri ah oo kuu ogolaanaya inaad abuurto bogagyo badan oo ku qoran luuqado kala duwan oo wadaagaya hal database. Kuwa kale, waxaan soo jeedinayaa isticmaalka mid ka mid ah kuwan soo socda: Joomla, Magento, WordPress, ama Drupal. Sidaa daraadeed, waxaad heli kartaa faa'iidooyin wanaagsan, sida soo socota:
hoos u dhigista meelo, kharashyo badan oo raqiis ah (xusuusnow, Google wax farqi ah kuma laha goobta martidaada, maadaama mashiinka raadinta uu isticmaalo calaamado kale si aad u muujisid dhagaystayaasha aad door bidayso
maareynta anshax ee wax soo saarka ah ama shabakado badan
cusboonaysiinta isdabajooga ee shabakadahaaga oo dhan, isla mar ahaantaana, inaad la macaamilayso dib u qaabeyn ama horumarin hal
Waxaan ku talineynaa in aan tixgelinno fursadaha soo socda ee suurtogalka ah si loo dhiso qaab-dhismeedka boggaaga:
Domains heerarka iyo heerarka wadamada. de Jarmalka)
Goob kasta oo heer caalami ah waa in ay leeyihiin sub-domains
Qayb-hoosaadyo soo galaya heer kasta oo heer caalami ah
Ka fiirso xuduudaha URL
) Ku xakamee luqadda leh cookies
Aniga, aniga oo aan dooranayo aalado calaamad ah oo waddan ah si aan kuugu darno SEO si aad u heshid shabakado leh faa'iidooyin badan. Haysashada wadan geotargeting waa wax weyn oo loogu talagalay, sababtoo ah isticmaale kasta oo markasta loo sheego, in ganacsigaagu yahay mid aad u culus oo diiradda saaraya dawlad kasta gaar ah. Ka dib oo dhan, magaca domain hodanka leh keywords waxaa si sahlan loogu turjumi karaa waddan kasta si loo sameeyo dallacsi online ah ee sheygaaga muhiimka ah ama adeegga xitaa diirad saaran (xusuusta, ikhtiyaarkan ma samayn doono, haddii aad la tacaalayso kala duwanaansho kala duwan, kuwaas oo horeba waxay diiradda saartay hal erey oo kelmad leh ama erey muhiim ah).
Qodobo kale oo ku-ool ah oo caalami ah Waxaan isticmaalaa SEO si aan u helo website.
Lahaanshaha xogta hal-keliya ee CMS waa mid weyn. Laakiin wali waa qiimeyneysaa haddii qaabka guud uu si sax ah u sax yahay. Habkaa, waxaad isticmaali kartaa tagsiyada hreflang ee Google si toos ah luuqadda (ma ahan waddan) waa bog kasta bogga.
Iyadoo la tixgelinayo qaar ka mid ah tarjumadaha turjubaanka, gaar ahaan ku saabsan naxwe ahaan aan ku qanacsanayn Google, waa inaad isticmaashaa naxwaha qoraalka ugu saxsan qayb kasta oo ka mid ah boggaaga. Laakiin si qoto dheer ayaan u ogaaday in shuruucda naxwaha laga yaabo in mararka qaarkood la dayaco, oo si buuxda u faaiidaysto farsamaynta farsamo. Waxaan loola jeedaa in websiyo badan oo leh darajo sare ay badanaaba isticmaalaan ereyada muhiimka ah ee naxwaha leh ama odhaahyada, oo weli caddaynaya inay aad u habboon yihiin. Sidaa darteed, waxaan kugula talinayaa raacitaanka xeerarka naxwaha adag ee aad ku qoreen cutubkaaga oo dhan, iyo meel kasta oo kale. Kaliya xusuusnow in aad Metadata, URLs, iyo qoraalka qoraalka ah ee aad adigu si xor ah u leedahay inaad si xooggan u xoojiso odhaahyada muhiimka ah ee la raadin karo oo kaliya, halkii naxwaha.
Ugu dambeyntii, waxaan jeclaan lahaa in aan muujiyo markale mar kale - isticmaalka turjumaad caadi ah sida caadiga ah oo ka goosanaysa waxyaabo badan oo muhiim ah ayaa ah qaabka ugu xun ee lagu daro SEO. Si loo gaaro ujeedo heer sare ah oo caalami ah oo loogu talagalay raadinta laba-luqadlaha ah, waxaan ku talin lahaa in ay leedahay turjumaad tarjubaan oo kaliya, kaas oo ku daraya dhisme isku dheelitiran iyo cilmi-baaris ballaaran oo muhiim ah. Weligaa ha ku degdegin inaad isku daydid inaad luqado dhowr ah ku wada hadashaan, sida ganacsi caalami ah oo guuleysta oo caalami ah waxay u baahan tahay wax walba oo joogto ah, hal wax Source .